कोरोना संक्रमित मैले देखेको हाम्रो समाज - onlinekarnali.com
। ५ आश्विन २०७७, सोमबार १८:५० मा प्रकाशित
डा. जीना सापकोटा लेखिका
२०७७ सालको बैशाख महिनाको उच्च गर्मीसंगै कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याले पनि सिंढी चढिरहेको थियो । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक भएकोले मलाई कोभिड-१९ आइसोलेसन अस्पतालमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो र टिममा हामी ५ जना सदस्य थियौं ।
केही छिन पछि तिनै निको भएर घर फर्कन लागेकी महिलाका एक छिमेकीले आएर भन्नु भने- “एउटा अटो पाएका थियौं तर उसले मेरो अटोमा कोरोना भएका मान्छे राख्न त के छुन पनि दिन्न । बरू जेल जान तयार छु । उनीहरूलाई त कुनै हालतमा राख्दिन भन्यो । उसले मेरो कुरै सुनेन । हामीले उसलाई उनीहरू कोरोना उपचार भई निको भएका मान्छे हुन् भन्दा पनि लैजान ठाडै अस्वीकार गर्‍यो ।”
बिहान १०:०० बजे डिस्चार्ज भएका उनीहरू सवारी साधनलाई कुर्दाकुर्दै दिउँसोको ३:०० बजिसकेको थियो । साँझसम्म पनि हामीसंग हिंड्नु बाहेक कुनै पनि अर्को विकल्प रहेन । संयोगवस अस्पतालकै अरू बिरामी सुर्खेत पुर्‍याएर फर्केको एम्बुलेन्स पनि आइपुग्यो र हामीले उनीहरूलाई त्यही एम्बुलेन्समा राखेर घर पुर्‍याउन सफल भयौं ।
जाने बेलामा ती महिलालाई “केही अप्ठ्यारो परेमा जुनसुकै बेला पनि फोन गर्नुहोला है ।” भनेर मेरो मोबाइल नम्बर दिएकी थिएँ । अहिलेसम्म मलाई उनको कुनै पनि फोन आएको छैन । म सोचिरहन्छु- आजकल उनको जीवन कसरी चलेको होला? उनले अझैं पनि सामाजिक विभेदको सामना गरिरहेकी होलिन् कि नाइँ ?
परदेशमा छैन सुरक्षित बास, छिटै स्वदेश फर्किने धेरैको आश
भूत प्रेत र बोक्सि भ्रम कि यथार्थता ?